Jaal Marroon Kunuusifamuu Qaba! |
Home Afaan Oromoo Jaal Marroon Kunuusifamuu Qaba!
Damee Boruu: 1/19/2019
Jaal Marroon ija firaa fi diinaa keessa seenee jira. Firri isaa isa jaalata. Isa mararsiifata. Akka umurii bara dheeraa qabatu hawwaaf. Waaqas ni kadhataaf. Tumsa, gargaarsa, eggannaa fi tuhannaa danda’u maraa godhaaf.
Diinni uummata isaa kan taane Mootummaan Habashaa har’a OPDO of dura ooftee deemaa jirtu isa dhabamsiisuu kuftee kaa’aa jirti. Du’aa isaa ykn fayyaa isaa argachuuf waan hin goone hin qabdu. Humna waraana kumaatamaan itti bobbaatee hin milkaa’iin jirti. Innuu gahuu dinaan xayyaaraa kaaftee akka maraachaa jirtu argaa jirra.
Namoonni goota tahan du’a hin sodaatan. Haalli kun qama isaanii keessaa isa dadhabaa dha. Yoo lubbuu dheeratan qabsoo geggeessaa jiraniif akka qorcha tahan ni dagatu. Jiraachuun Jaal Marroo WBO ni onnoomsa. Uummata Oromoo ni gootomsa. Abdii bilisummaa ni dhiyeessa. Karaa biraa diina Uummata Oromoo ni romisiisa.
Ammaa kaase eeggannoo fi tuhannaan Jaal Marroo fi ajajoota naannoo Kiba Oromiyaaf godhamu haalan jabaachuu qaba. Guddinni teknoloogii karaa tokko faayidaamuuf bareedaa dha. Karaa biraa balaa guddaa akka qabu dagatamuu hin qabu. Keessatu telefoonaan dhima bahuun karaa GPS akka nama saaxilu hubatamee eegannaa gochuun barbaachisaa dha.
Fakkeenyaaf Israal Ammajii bara 1996 ajajaa waraana Haamas kan ture Yahya Ayash lafaan, bishaanii fi qileensa irraan argachuu kan dadhabde obbolleessi isaa akka telefoona bilbluuf godhanii boobii electronics wajjin wal qabsiisanii akka gurra isaa irratti dhowwu godhanii ajjeessan. Warri Habashaa teknologii kana har’a yoo hin qabaane michoota isaanii warra Israal, Ingilizii fi Ameerikaa irra argachuu danda’u.
Waan biraa yoo dadhabde mootummaan Habashaa summii nama nyaachisuun amala. Mudde 1981 saglii WBO Dhiha Wallagaa karaa Sudaan biyya seene summii nyaachisanii namni hunduu batalatti yoo dhuman Jaal Dawud Ibsa qofatu keessa gaggabee lubbuun hafe. Lubbuun hafuun isa akka Kaayyoo Bilisuummaa Oromoo itti cicee asiin gahuuf sababa tahee jira. Kan baayyee namaaf hin liqifamanne namni summiiisaan nyaachisu kun obboleessa haadhoo isaas summii nyaachisee wajjin ajjeessuu isaati. Har’a garuu damaqinsi uummata keenyaa kana bira darbeera yoo jenne illee kan horiin bitamu hin jiru jechuun rakkisaa dha.
Kana malee warra garaa isaaniif jiraatan warra akka Kamaal Galchuu fi Haailuu Gonfaa ABO itti makamanii diiguuf ergaman hin jiran jechuun hin danda’amu. Waan haraka laatan fakkaatanii waraana diiguu fi ajaaja waraana fira fakkaatanii akka adamsan warri ergamu har’as akka jiran dagachuu hin qabnu. Warra harka laatan sirti qorachuu fi duuba isaanii waan jiru utuu adda hin baasiin waraanatti dabaluun balaa qaba. Duraan dursinee eenyummaa isaanii beekuu qabna. Maaliif akka Kamaal Galchuu B. J. ofiin jedhee hin dhufne ajajaa WBO jalatti buluu qaba.
Ajajaan waraanaa warri midiyyaa irratti ifa bahanii saaxilman uufata isaanii, rifeensa isaanii waan fakkaatan mara jijjirachuu qabu. Bakka oolanii fi bulan namoota isaan eeganiif warra isaan wajjin sadarkaa olii jiran qofti beekutu karaa dha. Diina of burjaajeessun qabsoo keessatti baayyee barbaachisaa dha. Kana booda jaal Marroon Midiyyaatti baahee odeessuun barbaachisaa miti. Firaa fi diina jalaa daachuu qaba. Qabsooo Bilisummaa Oromoo keessatti Qaroon ilmaan Oromoo hedduun tasa wareegamuun akka qabsoon lafa irra harkisamu godhee jira.
Gootummaan qofti wareegama salphaa nama hin oolshu. Qaroominaa fi eegannaa guddaatu wareegama tasaa jalaa nama olcha. Gootni keenya goorsa jaallewwan isaaniis dhageefachaa ofiis itti yaadaa akka qabsoo bilisummaa uummata isaanii galmaan gahuuf akka nuuf jiraatan gargaarsa goonuuf irratti kadhanaan keenyaan galagalaa fi ganama isaan wajjin dhaabbachuu qabna.
Previous articleMiseensota fi Deegagrtoota ABO Hidhaman
Next articleMootummaan Itoophiyaa Miseensotaa fi Hoogganoota ABO Irratti Gaggeessu Hatattamaan Akka Dhaabbatu Gaafanna !